Bọchị: Machị 29, 2020
Dika onu ogugu ekwuputara site na weebụsaịtị nke Ministry of Health, akuko Coronavirus bu nke 29.03.2020 bu nke a: Na ngụkọta, e mere nnwale 65.446 ma chọpụta ọnọdụ ikpe 9.217. Enwere ọnwụ 131 na mmadụ 568 nọ na nlekọta anya. [More ...]
N'ihi ntiwapụ nke Coronavirus, mmegharị nke ime obodo na Istanbul dara 8 percent. Site na okirikiri nke Mịnịsta nke ime ụlọ, ndị njem na-eburu ikike nke ụgbọ njem ọha na-ebelatalata pasent 50. Ndi isi obodo Istanbul, Ndi nwere ego nke ego ha adighi agha ha [More ...]
Dị ka akụkụ nke ọgụ megide ọrịa coronavirus (Covid-19), ụmụ amaala 28 ndị Turkey, ndị si New York, ka ụgbọ ndị Ankara Metropolitan Mungo dị na Ankara Metropolitan MunGO dị na 2020 March 241. Ego [More ...]
Kahramanmaraş Metropolitan Municipality kwuputara na ha webata usoro iwu mmekọrịta mmadụ na ụgbọ njem ọha. Kahramanmaraş Obodo ukwu nke gbagotere aka n'usoro nke ọrịa coronavirus, nke metụtakwara ụwa niile n'oge na-adịbeghị anya. [More ...]
Iji kpuchido ahụike ọha, a na-anabata njem ụgbọ ala etiti n'etiti kwekọrọ na ndụmọdụ nke kọmitii sayensị. Citizensmụ amaala nwere ikike ịga njem ma mezuo ọnọdụ ndị akọwapụtara nwere ike [More ...]
Obodo Manisa na-aga n’ihu na-emebi ma na-ehicha ọrụ ndị ebidola n'ụgbọ njem ọha na eze n'ime oke ọgụ nke ntiwapụ nke ọrịa coronavirus (Kovid-19). Transportationgbọ njem ọha, nke bụ mpaghara ebe ọha na-eji eme ihe maka ọgụ dị mma megide coronavirus [More ...]
Mersin Metropolitan Municipality, niile na-agbasa n'ụwa na Turkey na-amụba akporo nke jikoro e site abụrụ coronavirus efesa. Obodo ukwu nke obodo ukwu jiri uwe mgbasa ozi ọha na eze buso Coronavirus ozi. Metropolitan, [More ...]
Obodo Kocaeli mebere mkpebi ọhụrụ gbasara ụgbọ ala ndị na-ebugharị ọha na eze megide ọrịa nje corona. Iji gbochie ego ibute oria a, ka nke Eprel 1, n’ụgbọ njem ndị ọha na eze, [More ...]
Kwa ụbọchị, ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa na-eji ụgbọ njem ọha maka njem ha kwa ụbọchị. Okporo ụzọ nke obodo na oke ọnụnọ okporo ụzọ, yana coronavirus, belatara nke ukwuu. “Ntugharị n'obodo ndị dị mkpa n'ụwa [More ...]
Onye na-ahụ maka ezinaụlọ, ndị ọrụ na ndị ọrụ na-elekọta mmadụ Zehra Zümrüt Sel announceduk kwupụtara na ihe ruru nde ndị larala ezumike nka ruru iri na abụọ ga-enweta nkwanye ugwu mmemme Ramadan site na Eprel 12-7. Ndị otu SSK n'etiti 11-7 Eprel, ndị Bağ-Kur na ndị lara ezumike nká [More ...]
Minista na-ahụ maka ime obodo zigara okirikiri ọzọ na ọkwa gọvanọ iri asatọ na isii na ụgbọ elu “plagbọelu / ụgbọ ala” n'usoro “Coronavirus እርምጃዎች”. N'ihi ya, ndị njem ahụ ga-anọrịrị n'ụgbọ elu ụgbọ elu, na-amalite n'elekere isii nke ehihie taa. [More ...]
Ngalaba Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Transportgbọ njem United States (BTS) Izmir kwupụtara ọkwa ya na mpempe akwụkwọ coronavirus. Ihe dị ka 50.000 kwa ụbọchị na MARMARAY, 10.000 na BAŞKENTRAY na Ankara na 54.000 na İZBAN na İzmir na-aga [More ...]
Haydarpaşa-İzmir akara, nke Steeti wuru na Machị 29, 1880, agbazinyela ụlọ ahịa nri Britain. Ndị bi n'ụlọ ga-ewulite obodo Ottoman INC ma kwụọ ụgwọ pasent 80 nke uru ha na steeti ahụ.